Barattooti Oromoo Mormii fi Balaaleffannaa Itti Fufan.
Date: November 30, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 30 Sadaasa 2015) Barattooti Oromoo mormii fi balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran jabeessanii itti fufan.
Odeeffannoon roga hunda irraa nu gahaa jiru akka addeessutti barattooti Oromoo saamichi lafaa akak dhaabbatu, miidhaa mirga namoomaa akka dhaabbatu, mootummaan Ummata Oromoo bakka bu’u akka ijaaramu gaafacha ajiru.
Oromiyaa Lixaa magaalaa Mattuutti mormii har’a ganama godhame irratti barattooti roorroon ummata Oromoo irraa akka dhaabbatu sirbaa fi weedduun gaafataniiru.
Hiriirri kun Oromiyaa Bahaa Yunivarsitii Haromaayaa keessattis akak adeemsisame odeessi nu gahe hubachiisee jira.
Akka odeessa nu gaheetti diddaa fi mormii abrattootiaa kana dhaabuuf humni agaazii guddaan bobbaafamee jira.
Poolisiin Agaazii barattoota karaa nagaa hiriira gaggeessaa jiran reebuu waan eegaleef, hiriirichi gara jeequmsaatti jijjiirame.
Ammatti miidhaa gahe adda baasuun rakkisa ata’u iyyuu, agaaziin barattoota hedduu akka miidhee fi akka hidhe beekameera.
Previous Previous post: የኢሬቻ በዓል አከባበር -Part 2
Next Next post: BBCn Tamsaasa Afaan Oromoo Eegaluuf Murteesse